रुनलाई जिन्दगी एकदमै छोटो छ.
इलाम, कार्तिक १६ - हिजो मुस्कुराएको थिएँ
आज पनि मुस्कुराइरहेको छु
भोलि पनि मुस्काउने छु
किनभने केही चीजका लागि रुनलाई जिन्दगी एकदमै छोटो छ...
इशा कार्कीले केही दिनअघि लेखेको फेसबुक स्ट्याटस हो यो । जिन्दगी छोटो छ भनेर लेखेको केही दिनमै शनिबार बिहान उनको कलिलै उमेरमा बस दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
२० वसन्त पार गरेकी उनको जीवन वास्तवमै छोटो साबित भयो । मकवानपुरमा अर्को बससँग जुधेर भएको दुर्घटनामा इशाजस्तै इलामका उदाउँदा युवायुवतीको ज्यान गएको छ । अधिकांश राजधानीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दै थिए । दसैंतिहारको बिदामा आएका उनीहरू आउने वर्षहरूका पर्व परिवार र संगीहरूलाई खल्लो हुने गरी सदाका लागि बिदा भएर गए ।
बिहान ३ नबज्दै मालापथका इन्द्र श्रेष्ठको घरमा टेलिफोनको घन्टी बज्यो । निद्राकै बेला बजेको घन्टीले उनमा शंका उब्जिसकेको थियो- सामान्य अवस्थाको फोन होइन । चितवनबाट माइती आएकी आफन्त चेलीलाई दिउँसो मात्र बस चढाएका श्रेष्ठलाई त्यही गाडी दुर्घटना भएको खबर आएको थियो । चेली दुर्घटनामा परेर घाइते भएको खबरसँगै अन्य थुप्रै इलामेको निधन भएको खबर एकसाथ उनले सुने । आफन्तजन राजधानी पठाएका सबै परिवारमा यसैगरी शोकको बादल छाएको छ ।
उज्यालो नहुँदै दुर्घटनाको खबर जिल्लाभर फैलियो । चोकचोकमा घटनाबारे जिज्ञासा राख्नेको भीड बाक्लियो । दिनभर यो क्रम
चलिरह्यो । घटनामा मृत्यु भएका परिवारका आफन्त सम्हालिन सकेका छैनन् । घाइते हुनेका परिवार पनि आफन्तजनको स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्ताले पिरोलिएका छन् । घटनाको जानकारी पाउनासाथ मृतक र घाइतेका परिवार घटनास्थलमा पुगे । केही शव बुझेर फिर्ने क्रममा छन् । झन्डै तीन दशकअघि राजधानीसँग रात्रि बस सम्पर्कले जोडिएयता दुर्घटनाबाट इलामले सबैभन्दा धेरै क्षति शनिबार बिहान भोगेको हो ।
दसैंतिहार सकेर राजधानी फिर्ने क्रममा मृत्यु हुने र घाइते हुनेमा धेरै राजधानीका कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी छन् । कोही व्यवस्थापन, कोही सूचना प्रविधि अनि कोही विज्ञान विषय पढ्दै थिए । तीमध्ये केही स्थानीय सञ्चार माध्यममा कार्यक्रम चलाउने अनि सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुने भएकाले धेरै चिनिएका थिए । दुर्घटनाले जिल्लाका उदाउँदा युवा पुस्ता गुमेकाले पनि सर्वत्र चिन्ता छाएको हो । दुर्घटनामा पर्नेमा एकै परिवारका दुई जनासम्म छन् ।
सदरमुकामबाट शुक्रबार दिउँसो हिँडेको ना५ख ४८४१ नम्बरको मेट्रो डिलक्स र काठमाडौंबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको ना४ख ५४४९ नम्बर बस मकवानपुरको बस्तीपुरमा ठोक्किँदा मृत्यु हुनेमा १० जनामध्ये ८ जना इलामका छन् । बसमा अधिकांश पर्व मनाएर राजधानी फिर्ने विद्यार्थी र विभिन्न पेसामा आबद्ध थिए । घाइते ३० मध्ये पनि अधिकतम यहींका छन् । मृतकमध्ये इलाम नगरपालिकाका पाँच जना छन् । नाम्सालिङका दुई र बरबोटेका एक जनाको ज्यान गएको छ ।
'हितैषी तीन जना साथीले संसार छाडेको
खबर एकाबिहानै सुन्दा मन थाम्न सकिएको
छैन,' गोलबस्तीका मौसम बस्नेतले भने,
'उनीहरू छैनन् भन्ने खबर पत्याउनै मुस्किल भइरहेको छ ।'
यसैबीच, कांग्रेस र एमालेले विज्ञप्ति निकाल्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । अप्रत्याशित घटनाले शोकमग्न भएको भन्दै इलाम उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार बजार बन्द गर्ने
जनाएको छ । © Copyright 2014. Radio Prakriti 93.4 MHz All rights reserved.